Banyere LinuxCapable - LinuxCapable
LinuxCapable.com raara onwe ya nye na-ebipụta Linux howtos, ndụmọdụ na nkuzi na nkesa Linux dị iche iche na-elekwasị anya na webụ na ngwanrọ nkesa. Ihe atụ isiokwu ekpuchiri bụ ngwaọrụ mepere emepe, ime ihe ike, nchịkwa sistemu na ọtụtụ ndị ọzọ.
Joshua James kere LinuxCapable na July 2021 ma ka dị ọhụrụ ma na-achọta ebe ya nwere atụmatụ na njirimara mana ọ na-amalite itolite ma nwee olileanya ịbụ ihe mgbama maka ndị ọrụ n'ọdịnihu ịchọta ozi bara uru na enyemaka gbasara nkuzi ndị ebisara.
Isi ihe mere e ji mepụta webụsaịtị ahụ bụ ọtụtụ ụzọ na nkuzi na-elekwasị anya na sysadmin ma ọ bụ onye ọrụ ike. Emebere LinuxCapable.com ka ọ dị ọhụrụ nye ndị ọrụ Linux ma ọ bụ ndị ọrụ etiti chọrọ ozi ndị ọzọ. Ọtụtụ saịtị nkuzi yiri nke a, na-ekwughị na nke a dị njọ ma ọ bụ na-ezighi ezi. N'ezie, ọtụtụ ndị dị egwu. N'agbanyeghị nke ahụ, LinuxCapable na-agbalị ịkọwa ihe dị mfe karị, yana ozi ndị ọzọ na nhọrọ ndị ọzọ iji nwee olileanya inye onye ọrụ ọhụrụ echiche na ọ bụghị naanị na ị ga-agbaso otu ụzọ a ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume.
N'ozuzu, isi ebumnuche nke webụsaịtị bụ iweta nkuzi nkuzi na-aga n'ihu iji kpuchie ọtụtụ isiokwu dịka enwere ike, na n'ọdịniihu nwere ike gbasaa dabere na oge onye nwe ya. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịkpọtụrụ LinuxCapable ozugbo, gaa na nke anyị Kpọtụrụ anyị na peeji nke.